I-Vibenomics Ukukhangisa Okulalelwayo Kwangaphandle Kwasekhaya: Umculo Owenziwe Ngezifiso, Osekelwe Endaweni Nemilayezo | Martech Zone
I-Vibenomics Ukukhangisa Umsindo Kwangaphandle Kwekhaya: Umculo Owenziwe Ngokwakho, Osekelwe Endaweni Nemilayezo
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 24, 2018 NgoLwesibili, ngo-Mashi 8, i-2022 Douglas Karr
Isikhulu sePrime Car Wash u-Brent Oakley ube nenkinga. Imishini yakhe yokuwasha izimoto ephambili yaba nenhle kakhulu, kodwa ngesikhathi amakhasimende akhe esalinde imoto yawo, akekho owayebaxhumanisa nemikhiqizo emisha nezinkonzo okwakumelwe bazinikeze. Wakha inkundla lapho ayengaqopha khona imilayezo yomuntu siqu, esekelwe endaweni nomculo kumakhasimende akhe.
Ngenkathi eqala ukukhuthaza ukufakwa kwe-washi ngaphambili nge-radio yasesitolo, wathengisa ama-wiper amaningi ngenyanga eyodwa kunalokho ayekuthengisile eminyakeni emihlanu edlule. UBrent wayazi ukuthi wayengenaso nje isixazululo samakhasimende akhe, wayeneplatifomu imboni eyayiyidinga. Ngakho-ke, washiya ibhizinisi lokuwasha izimoto waqala Ama-Vibenomics.
I-Vibenomics inkampani yokukhangisa ye-Audio Out-of-Home™ esekelwe endaweni kanye nesipiliyoni enika amandla iziteshi zomsindo kubathengisi, enikeza imikhiqizo ikhono lokukhuluma nabathengi ngokuqondile lapho kuthengiswa khona. Ngobuchwepheshe bayo obunamandla obusekelwe emafini, umtapo wolwazi womculo ongemuva onelayisense, amandla okuhlanganiswa kwedatha, ithimba elisebenza ngokugcwele lochwepheshe bokuhlangenwe nakho komsindo, kanye nenethiwekhi yethalente lezwi lochwepheshe elifuneka kakhulu, inkampani inikeza ivayibhu yokuthuthukisa imali efanele kubakhangisi abangaphezu kuka-150 izindawo ezingaphezu kwezi-6,000 kuzo zonke izifundazwe ezingama-49, zifinyelela kubantu abangaphezu kwezigidi ezingama-210.
Izitolo zokuthengisa zivame ukukhokhela izixazululo zomculo ezinelayisensi, kodwa i-Vibenmoics empeleni inikeza isixazululo somculo nemiyalezo enembuyiselo ekutshalweni kwezimali.
I-Vibenomics inika amabhizinisi ukufinyelela kumtapo womculo onelayisense ephelele kanye nohlelo lokusebenza olusebenziseka kalula oluwavumela ukuthi athumele futhi amukele izimemezelo ezenziwe ngokwezifiso, eziqoshwe ngokomsebenzi ngosuku olufanayo ozicela ngalo. Amabhizinisi akudingeki akhathazeke ngomkhawulokudonsa noma ngezinkinga zobuchwepheshe - inkundla isebenza kumathebulethi e-Sprint-powered. Vele uyixhume, futhi usuyasebenza!
Ilethwa nge-plug-and-play eguquguqukayo, ubunikazi, i-IoT enikwe amandla abadlali bemidiya, i-Vibenomics isakaza ngokuguquguqukayo izikhangiso zomsindo eziqondiswe kakhulu, ezifunwa kakhulu kanye nohlu lwadlalwayo olukhethiwe ngaphakathi kwanoma iyiphi inhlanganisela yezindawo kuwo wonke umlando wayo okhula ngokushesha kazwelonke, ivula isiteshi esinamandla sokuthengisa sabathengi. ukuze kufinyelelwe abathengi ngesikhathi sezinyathelo zokugcina ezibalulekile endleleni yokuthenga. Ngohlelo lukazakwethu lokuqala olohlobo lwalo, abathengisi bangathola ingxenye yemali engenayo yazo zonke izikhangiso ezithengiswa i-Vibenomics ezidlala ngaphakathi kwezindawo zabo, okubanika amandla okwenza imali ngamaza abo omsakazo ayimfihlo futhi baguqule izindleko zefa zibe isikhungo esisha senzuzo. .
Nge-Vibenomics, amabhizinisi angaqhuba imiphumela yebhizinisi:
Phusha imikhiqizo ngokushesha futhi wandise amathuba emali engenayo kuwo wonke amakhasimende.
Fundisa amakhasimende ngemikhiqizo emisha nokunikezwayo njengoba kutholakala
Shayela amakhasimende kuwebhusayithi yakho ukuthola amakhuphoni namaphromoshini.
Amabhizinisi awakwazi nje ukushicilela imilayezo yawo kuphela, kodwa angavula inethiwekhi yawo kubakhangisi bezinkampani zangaphandle! Hlola yabo izixazululo ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuthi bangasiza imboni yakho.
Lalela Ingxoxo yethu neBrent Cela i-Vibenomics Demo
Tags: awuaooh ukukhangisaimiyalezoUmculoOOHooh ukukhangisaukukhangisa ngaphandle kwekhayainethiwekhi yomsakazoumsindo wokuthengisasibenomama